FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA BULLADOR - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Bullador
Alika mifangaro mifangaro ny Bulldog / Labrador
'I Brutus zanako ity. Izy dia English mix Bulldog / Lab (aka Bullador). Tena tia milalao sy be fitiavana izy. Tsy taolana ratsy ao amin'ny vatany. Mianiana aho fa nahita baolina 30-40 mahery tamin'ny fanananay tamin'ny toerana rehetra — tsy fantatray akory fa nanana izany izahay! Tiany ny milomano ary mandeha mihaza vodin-tany. Tiako ny Brutus-ko! '
Ny alika Bullador dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Bulldog ary ny Labrador retriever . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra eo amin'ny hazofijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ireo karazana ao amin'ny hybrid ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
'I Domino ity. Izy dia English mix Bulldog / Lab (Bullador). Vao 8 herinandro monja izy tamin'ity sary ity ary efa mankafy ny fiononan'ny fianakaviany sy ny tranony vaovao. '
saint bernard newfoundland afangaro alika kely
Brutus ny mix English Bulldog / Lab (Bullador) miala sasatra
Brutus ilay English Bulldog / Lab mix (Bullador) adala amin'ny taolany.
'Manana Bulldog anglisy madio aho ary niara-niangona tamin'i Labrador purebrador niaraka tamin'ny taratasy izy ary niteraka (tsy C-section) zanak'alika 7! Samy hafa ny fiavian'izy rehetra. Mahafatifaty tokoa izy ireo. Ity pup ity dia aseho eto amin'ny 5 herinandro. '
Alika kely Bullador amin'ny 5 herinandro (alika alikaola Bulldog / Labrador Retriever English mix)
Alika kely Bullador amin'ny 5 herinandro (anglisy Bulldog / Labrador Retriever mix dog) mijery ny vilany voninkazo vaky.
Alika kely Bullador amin'ny 5 herinandro (anglisy Bulldog / Labrador Retriever mix dog) miaraka amin'ny reniny Bulldog anglisy
doxin afangaro amin'ny spaniel akoho
ny fako alika kely Bullador eo amin'ny 4 herinandro eo ho eo (anglisy Bulldog / Labrador Retriever mix dog dogs)
Alikan-jaza alika kely Bullador sahabo ho 3 herinandro eo ho eo (English Bulldog / Labrador Retriever mix dogs)
Alika kely Bullador eo amin'ny roa herinandro eo ho eo (karazana mix Bulldog / Labrador Retriever anglisy)
sarin'ny glider glady
apricot kilalao poodle feno lehibe
laboratoara sy poodle kely mifangaro
mpiandry alemanina antsasaky chow
pekingese sy jack russell mifangaro
poodle bichon mainty sy fotsy